Firenena 7 no handray anjara ao anatin’ny lalaon’ny nosy izay ampiantranon’i Maurice : ny avy any Mayotte, Maldives, ny avy atsy amin’ny nosy Comores, ry zareo Réunionnais, Seychelles ary i Madagasikara. Atleta tsy latsaky ny 2000 no samy hiezaka ny hanandratra ny voninahim-pireneny, amina taranja miisa 14. Dia ny taranja Athletisme, Ny Taranja lomano , Ny taranja Baolina kitra, izay taranja manana ny medaly volamena be mpitsiriritra indrindra. Eo ihany koa ny taranja Volley ball, Beach Volley, Basketball, Rugby, Boxe, Cyclisme, Fibatana fonjamby, ny taranja Judo, ny Tennis de table, ary ny Voile.
Amin’ireo taranja 14 ireo. Ny taranja Athletisme, Badminton, ny Basket-ball, ny Boxe, ny Cyclisme, ny Baolina Kitra, ny Haltérophilie, ny Judo, ny lomano, ny rugby, ny tennis de table, Volley ball, ny Handisport izay anatin’ny taranja athletisme, ary ny volet jeunesse izay fifaninana ara-kolotsaina, no hananantsika mpisolo tena.
Saika amin’ny folo ora maraina avokoa no manomboka ny taranja rehetra, ary mifarana amin’ny fito ora sy sasany hariva eo ho eo. Ny taranja baolina kitra no hanokatra ny lalaon’ny nosy eto amin’ny ranomasim-be Indiana.
Nisy ny atleta Malagasy efa niainga omaly, raha toa ka androany no hianga ny ankamaroany miaraka amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena. Isan’ny tena nampiavana ity lalaon’ny Nosy andiany faha-10 ity teto amintsika moa ny fanohanana mivantana avy amin’ny governemanta. Samy nanana Minisitra mpiahy avokoa ny taranja rehetra. Ary ireo ministera ireo no nanome ny vatsin-dalàna entin’ny taranja tsirairay miatrika ny fifaninana.